သတင်းတစ်ပုဒ်…ပန်းတစ်ဆုပ်…။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » သတင်းတစ်ပုဒ်…ပန်းတစ်ဆုပ်…။	42
Posted by black chaw on Mar 20, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Celebrity, Creative Writing, Entertainment, Myanma News | 42 comments
သတင်းတစ်ပုဒ် ပန်းတစ်ဆုပ် ပို့စ် ထဲ မှာ
နာမည်တွေထည့်ပြီး စ…နောက် ထားတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေ အနေနဲ့
ရွှေစိတ်တော်ညို အလိုမကျဘူးဆိုရင်ဖြင့် ပြန်ဖျက်ပေးပါ့မယ်လို့
ကျွန်တော်တို့ ရွာကြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြစ်စေဖို့
ကြိုးစားကြည့်နေတဲ့ သဘောမို့ မျက်စိနောက်သူများ ရှိနေရင်လည်း
သတင်းလေး တစ်ပုဒ် ရေးပြီး
ပန်းတစ်ဆုပ်နဲ့ တူတဲ့ အပျော်လေးတွေ ဖန်တီးချင်လို့
သတင်းတစ်ပုဒ် ပန်းတစ်ဆုပ် လို့ နာမည်ပေးထားတာပါ…။
ဂျပန် မင်းသားကြီး ဆန်နီချီးဘား က မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းကို ရုပ်ရှင်အဖြစ်ရိုက်ကူးစေချင်တယ်လို့
တကယ်လို့ ရိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အခုအထိ လွတ်လပ်ရေးမရရှာသေးတဲ့ သီဟတင်စိုး လည်း
ပါဝင် သရုပ်ဆောင်စေချင်ကြောင်း သီဟတင်စိုး ရဲ့ အမာခံပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့
ခင်ဇော် က ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်…။
အဆိုတော်တွေက ရုပ်ရှင်ရိုက်၊ မင်းသားတွေက အဆိုတော် လုပ်…။
အို…လုပ်ချင်ရာလုပ်နေကြတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့
သူထူးစံက လူမိုက် လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ စီးရီးတစ်ခွေ ထွက်ဦးမှာပါတဲ့…။
သူထူးစံ ရဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ချာတူး နဲ့ နွယ်ပင် တို့ ကတော့
သူထူးစံ ဘာလုပ်လုပ် အားပေးနေမှာပဲ ဖြစ်ပြီး အခုလည်း
မူရင်းအခွေကိုသာ ၀ယ်ယူအားပေးမယ်လို့ ကြုံးဝါးနေကြကြောင်း ကြားသိရပါတယ်ဗျာ…။
ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာ ကျော်သူနဲ့ တွဲဖက် သရုပ်ဆောင်မယ်လို့
သတင်းကြီးခဲ့တဲ့ စိုးသူ ပါဝင်နိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး…။ စိုးသူ နေရာမှာ ရဲအောင် က သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ
အဲဒီ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးသူရဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေ ဖြစ်တဲ့ မွသဲ နဲ့ မဝေ (weiwei) တို့က စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြကြောင်း နားစွန်နားဖျား ကြားထားရပါတယ်ဗျာ…။
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ရဲ့ ခါချနေရတယ် သီချင်းရေးသူ စနဲနေ၀င်း က
ဒီနေ့ခေတ် ယောက်ျား လေးတွေရော မိန်းကလေးတွေပါ ခါချနေရသူတွေ
များပါတယ် လို့ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဂဇက် ရွာကြီးမှာလည်း ယောက်ျားလေးထဲက
လူပျိုကြီး အမတ်မင်း၊ မိန်းကလေးထဲက မမခွစ် တို့ ၂ ဦးဟာ
ခါအချရဆုံး ရွာသူရွာသားများ ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အလှဆုံး စာရင်းဝင် အလှမယ် ဟန်သီ တစ်ယောက် ဧပြီလထဲမှာ ကိုရီးယားနိုင်ငံကို
သွား ဖြစ်ပါမယ်တဲ့။ အလှပြုပြင်ဖို့ ခွဲစိတ်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိပါဘူးလို့လည်း ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ သတင်း နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဟန်သီ ရဲ့ လက်ရှိအလှသည်သာ သူ့အတွက် စွဲမက်စရာ အကောင်းဆုံးပါလို့
Food မဂ္ဂဇင်း ရဲ့ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ မောင်အာဂ လေးက ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားလာပါတယ်ခင်ဗျာ…။
လက်ရှိ အအောင်မြင်ဆုံး အမျိုးသမီး အဆိုတော် ဒေါက်တာနီနီခင်ဇော် က သူမအနေနဲ့ တစ်ကိုယ်တော်
ရှိုးလုပ်ဖို့ အချိန်အများကြီး လိုသေးကြောင်း ပရိသတ် ချစ်ရန်လည်း လိုသေးကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားလာ
အဲဒီ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ နီနီခင်ဇော် ရဲ့ အမာခံ ပရိသတ် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဘဘ ဘလက် က
ဒီအချိန်ဟာ နီနီခင်ဇော် ဘာလုပ်လုပ် အားပေးမယ့်သူတွေ တန်းစီနေချိန်မို့ တစ်ကိုယ်တော် ရှိုးလုပ်ဖို့
၂၀၁၅ ခုရဲ့ ပြက္ခဒိန် စတား ဟာ စစ်လွန်းဝတီထက် ဖြစ်ကြောင်း ဓါတ်ပုံ မိုးကိုဦးက ထုတ်ဖေါ်ပြောကြား
အနည်းငယ် ငြိမ်သက်သလို ဖြစ်သွားတဲ့ သဉ္ဇာဝင့်ကျော် က သင်္ကြန်မှာ မိဘတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓ ဂါယာ ကို သွားမယ်
အဲဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာဂဇက် က အဘဖားသက်ပြင်းအနေနဲ့ သူ့တစ်ယောက်တည်း
ထားသွားရက်တယ် ဆိုပြီး စိတ်နာနာ နဲ့ သင်္ကြန်တွင်း ဘုန်းကြီး ၀တ်မယ်လို့ ဘီယာဝိုင်းတစ်ခုမှာ
အဆိုတော် ဥာဏ်လင်းအောင် နဲ့ မော်ဒယ်မလေး လမင်းအိမ်တို့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ထုတ်ဖေါ်
ဥာဏ်လင်းအောင် ကို ကြိတ်ကြိတ်ခိုက်နေတဲ့ အပျိုကြီး ရွှေအိတစ်ယောက် မျက်ရည်နဲ့
Shwe Ei says: -ဇဘင်ဖြောင့်ပီး..နှုတ်ခမ်းနီဆိုးတဲ့ ယောက်ကျားတွေကို သာမီးသိပ်မုန်းဒယ်..မာမီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
အမှန်က ဥာဏ်လင်းအောင်လေးက ညီးနဲ့ မှလိုက်ထှာအေ့…။
ခင်ဇော် says: နာ့ နာမည် သုံးဇာရှားလို့အေ။
သများက သူထူးစံ ကြိုက်သာအေ့။
လမင်အိမ် ဆိုတာ ဘူတုန်း??
အခုနောက်ပိုင်း သူထူးစံ ကြီးက
ရုပ်ကြမ်းကြီးနဲ့ အခြောက် ဇာတ်ရုပ်တွေ သရုပ်ဆောင်တာ
Mike says: .သတင်းတစ်ပုဒ် ပန်းတစ်ဆုပ်ဖတ်ပြီး ဘာမန့်ရမှန်းမသိလို့
.အသာလေးပြန်လှည့်သွားပါသည် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
Wow says: အော်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
အော်ရင် ဓါးနဲ့ ထိုးပလိုက်မယ် ဘာမှတ်နေလဲ…။
Wow says: ရွာထဲ ဒမြတွေဝင်လာဘီ… ကယ်ဂျပါအူးရှင်င်င်င်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
မအော်ပါဘူးရှင် လို့ ကြုံးအော်သလိုကြီး ဖြစ်နေပြီဗျာ…။
ငါ့များ ဒမြ တဲ့။
naywoon ni says: သီတင်းတစ်​ပုတ်​ရယ်​ ပန်း​လေးတစ်​ဆုပ်​ရယ်​
အသီးနှလုံးထုတ်​လို့ လွှင့်​ပစ်​လိုက်​ဒယ်​ ။ သတင်းကြိုက်​တတ်​ရင်​ နားဆင်​လိုက်​ဂျ ။ ပန်းနှစ်​သက်​သူ​ကောက်​ယူပါ​စေ ။ အသီးနှစ်​လုံး တွက်​​တော့ …………….
ဖိုးချိုသီချင်​ ပြင်​ဆိုလိုက်​ပါ​ကြောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
သတင်းတွေက အမှန်တွေ…။ ပန်းတွေက အပျော်နောက်ထားတာ…။
အဲဒီသီချင်းရဲ့ အဆိုရှင်က ဖိုးချိုမဟုတ်ပဲ
naywoon ni says: ငင်​ ကျ​နော်​ ကဖိုးချိုမှတ်​​နေတာ အဲ့ အချိန်​​လောက်​က ပန်းသီချင်း​တွေကလဲများသားဗျ ။ ပန်းအ​ကြောင်း ဆိုစရာကုန်​​တော့ ” မ ပန်းရယ်​ မငိုနဲ့” တဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
ခိုင်ထူး ရာဇ၀င်ကို ပိုမိုမြင့်တက်စေခဲ့သော
သီချင်းတစ်ပုဒ်ပန်းတစ်ဆုပ် ၁ နဲ့ ၂ ခွဲ ပြီး ၂ ပုဒ်ဆိုခဲ့တာပေါ့ဗျာ…။
တေးရေး ကိုမောင်မောင် လက်ရာသီချင်းမို့ မှတ်မှတ်ရရ မှတ်မိနေတာပါ။
နောက်ပိုင်း ကိုမောင်မောင် က ခိုင်ထူးကို သီချင်း ရေးမပေးတော့ဘူးလို့
ကိုနေ၀င်းက အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောလို့ မကြာခင်ကမှ သိခဲ့ရတာပါ…။
၀တ်မှုန် တို့ဘာတို့ ခိုင်ထူး သာဆိုခွင့်ရခဲ့ရင်…
Kaung Kin Pyar says: သီဟတင်စိုး၊ စိုးသူ၊ သူထူးစံ…အိုက်ဒါ အမေတို့ခေတ်တုန်းက ဟော့တ်ကျတဲ့ မင်းသားဂျီးဒွေ ဖြစ်သွားပြီ..။ ကိုယ်တွေက ခုမှ ခေးပဲရှိသေးတာ…
စိုင်းစည်တွမ်ခမ်းတို့ အလင်းရောင်တို့ခေတ် ဖြစ်နေပြီ…။
ဟန်သီလေးကို သဘောကျတယ်…၊ အနုပညာရှင်များရဲ့ ကလေးငယ်တွေထဲဆို…စစ်လွန်းလေးကိုလဲ ချစ်တယ်၊ ကျားပေါက်သမီးလေးကလဲ ထက်မယ့်ပုံလေး..၊ ဖစ်ဖစ်တုန်လေးကလဲ ချစ်စရာ…။
ဟန်သီထက်စာရင် ခင်ဝင့်ဝါလေးကို ပိုချစ်တယ်…။
လမင်းအိမ်ကို သိဝူးးးး။ ဥာဏ်လင်းအောင်ရဲ့ သူငယ်ချင်းသီချင်းကတော့ မုန်းတောင်လာပြီ…။
နီနီခင်ဇော်နဲ့ ဆုန်သင်းပါရ်အသံကို အကြိုက်ဆုံး..ပဲ..။
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ခါချတာကိုတော့….တကယ်ကြီး သွားကြည့်ချင်ပါရဲ့…။ လက်မှတ်တွေတောင် ကုန်လောက်ပြီ..။
ဟန်သီလေးကို သဘောကျတာတော့ တူဝါးဘီ။
နီနီခင်ဇော် ကြိုက်တာချင်းလည်း တူဝါးဘီ။
ဆုန်သင်းပါရတော့ ညီးပဲ ကြိုက်တော့အေ။
Mr. MarGa says: ဟန်သီလေးပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်
Mr. MarGa says: အခုတောင် သူလေးကို သိပ်မတွေ့လို့ စိတ်ပူနေတာဗျ
ဧပြီလထဲ ပွဲတစ်ပွဲ တက်ဖို့ ကိုရီးယားသွားပါမယ်ဆို
Mr. MarGa says: ဟေ့လူရီးးးး
ဦးကျောက်ခဲ says: အဟိ … ဘာမှတော့မဆိုင်…
တမနက်လုံး ခိုင်ထူးသီချင်းတွေ ညည်းနေတာ…
ခေါင်းစဉ်ကို အမှတ်တမဲ့ဖတ်ပြီး “သီချင်းတစ်ပုဒ် ပန်းတစ်ဆုပ်” မှတ်လို့…
pooch says: ဟွန့် စိုင်းစိုင်းသတင်းလည်းမပါဘူး
အော်ဇီကနေ ဘယ်နေ့ပြန်ရောက်မှာလဲလို့ မေးပေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
ဒီတစ်ပတ် ဂျာနယ် သတင်းတွေထဲမှာတော့
စိုင်းစိုင်း သတင်းက လုံးဝ ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်…။
သင်္ကြန်မတိုင်မီ မွေးနေ့ ရှိုးအတွက် တိတ်တဆိတ်ကြံစည် နေတယ်ထင်ပါရဲ့…။
နောက်တစ်ပတ်လောက်ဆို လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်လာမှာပါဗျာ…။
အင်း…စိုင်းစိုင်းတောင် ၄၀ ပြည့်လုနေပြီပဲ…။
kai says: ယူအက်စ်လာဦးမှာဗျ..။
နီနီခင်ဇော်တောင် အကိုနဲ့သိပ်ညှိမရလို့ ကပ်လွဲတာ…။
အားနာ စရာတွေတောင် ဖြစ်ကုန်ပြီ…။
နောက်တစ်ခါ နီနီ့ ကို ယူအက်စ် ခေါ်မယ်ဆို ကျွန်တော့်ကို ခိုင်းပါဗျာ…။
ခင်ဇော် says: ဩဇီမှာ သူ့မေမေဆီမှာ နားနားနေနေ
စိုင်းစိုင်း ဆိုရင် သူ ရှေ့ဆုံးက…။
Crystalline says: ကမတ်ကတော့ ခါချပြီး ပတ်ပါပြေးနေရတယ်ထင်တယ်.. တစ်ကိုယ်တော်ရှိုးက အရမ်းအောင်မြင်ချိန်လုပ်တော့ ပိုက်ချံပိုရတာပေါ့… စပွန်ဆာပေးခင်သူလည်းပေါ… R ဇာနည်တစ်ယောက်တုန်းက သူ့ခေတ်တော်တော်ကြာခဲ့ပေမယ့် ကျချိန်မှ တစ်ကိုယ်တော်ပွဲလုပ်တော့ လူသိပ်မဝင်ခဲ့သလိုပဲ…
ခွစ်မမ တစ်ယောက် ခါချနေရတယ်လို့
စင်္ကာပူက လူမိုက် ခင်ဇော်ကတော့ ခွစ်ရဲ့ မျက်နှာလေးကို မြင်ရရင်
အခု သူက သိတ်မစားနိုင်ဘူးဆိုလား…။
ဒေါက်တာနီနီ ခင်ဇော် ရော ချမ်းချမ်းရော
သူတို့ကိုယ် သူတို့ ယုံကြည်မှု ပြည့်ကြသေးဟန်မတူပါဘူး…။
၂ ယောက်စလုံးကို တစ်ကိုယ်တော်ရှိုးလုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ရှိနေခဲ့ပေမယ့်
အချိန်မတန်သေးလို့ လက်မခံကြဘူးလို့ သိရပါတယ်…။
ကျေးဇူး ပါ ခွစ်စ်…။
ခွစ် ကို မြင်ရမှဖြစ်မယ်
လူတွေ အရမ်းအရမ်း ပြောကုန်ကြပြီအေ…။
Ma Ei says: သေချာ မကြည့်မိဘဲ သီချင်းတစ်ပုဒ် ပန်းတစ်ဆုပ် ဆိုပီး ခိုင်ထူးသီချင်း အကြောင်းများလားလို့
ဖတ်နေရင်းနဲ့မှ ခေါင်းစဉ်ပြန်ကြည့်မိတာ…အဲ့လိုရယ်…သတင်းတွေလဲ စုံပါ့…
black chaw says: @ Ma Ei ;
မအိ ကွန်းမန့်လေးတွေ မမြင်ရတာ အတော်တောင် ကြာနေခဲ့ပါပြီဗျာ…။
အားရင်တော့ဖြင့် ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုပြီး အခုလို အားပေးလှည့်ပါဦးလို့
manawphyulay says: အင်း သတင်းတစ်ပုဒ်မှ မကဘဲ သတင်းတစ်အုပ် ပန်းဖွေးဖွေးဖြစ်သွားတယ်…
သတင်းလေးတွေက တစ်ပုဒ်ချင်းစီ…ပန်းလေးတွေကလည်း တစ်ဆုပ်ချင်းစီ…။
Alinsett@Maung Thura says: .လေးဘလက် အခုတလော ရေးနိုင် တွေးနိုင်နေလိုက်တာ..
သတင်းလေးတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဖတ်လို့ရအောင် ရေးနိုင်တာကို ငေးမော အားကျသွားပါတယ်.. ( အများ စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် ဂီတ လောကသားတွေရဲ့ သတင်းတွေကတော့ ကျနော့်အနေနဲ့ သိပ်ကြီး စိတ်အဝင်စားမရှိ….)
မြစပဲရိုး says: နီနီခင်ဇော် ဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် သီချင်း ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်လား။
သူက ဆရာဝန် လား။
ဂျပန် မင်းသားကြီး ဆန်နီချီးဘား က မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းကို ရုပ်ရှင်အဖြစ်ရိုက်ကူးစေချင်တယ် ဆိုလို့
ဂျပန် တွေ က သူတို့ စစ်တုန်း က ရက်စက် ခဲ့တဲ့ အကြောင်း တွေ ကို ကျောင်းတွေမှာ သင်တာ ဆိုဘဲ။
ဂုဏ်ယူဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ရှက်စရာ အဖြစ်မို့ အနာဂါတ် ကလေး တွေ သင်ခန်းစာယူပြီး ကမ္ဘာ မှာ ချစ်ဖို့ ကောင်း တဲ့ လူမျိုး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့ တဲ့။
ဒါကြောင့် ဂျပန် တွေ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ကို သမိုင်း အကြွေးဆပ်ဖို့ အတင်း နင်း ကူညီ နေတာ လား တောင် တွေးမိသေး။
အူးစည် says: အန်တီမြရေ.. ကျနော်ကတော့ ဂျပန်တွေက မြန်မာအတွက် သမိုင်းအကြွေးဆပ်ဖို့
ကူညီနေတာမဟုတ်ဘူးမြင်တယ်။ မြန်မာပြည်က စီးပွားရေးနည်းနည်းဟလိုက်တောင်
ဂငယ်တွေကတော်တော် အကျိုးမြတ်ရနေပီ။ အမှိုက်ပုံပို့ရတဲ့ ကားတွေ မြန်မာပို့ရင်း
၂ နှစ်အတွင်း ကားအိတ်စပို့တွေကော အစိုးရကော ထောနေကြပီ။ အဲ့ဒေါ့.. အဲ့ဒေါ့..
ဂျပန်မှာအနေကြာတဲ့ ဆြာတွေတော့ ပိုသိနိုင်မယ် ထင်ကြောင်း.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: သတင်းထူးတွေရမယ်။
ဒီသတင်းတွေကိုသာ လက်ပွေ့လိုက်ရောင်းရရင်………. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4812
မွသဲ ( 17082011 ) says: စိုးသူက အလကားလူမို့စိတ်မွင်ဇားဒေါ့ဝူးရယ်။ ယူဇရာမိန်းမဒလောက်ရှားဒလားလို့ ဟွင့်